BL Motel - ysmụ nwoke Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Motlọ ahịa BL nkezi 4.4 / 5 si 28
72nd, ọ nwere echiche 151K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Comedy, na-atọ ọchị, fantasy, Ihe omume, Otu gbara, romance, Ndụ akwụkwọ, Shounen Ai, Oberibe Ndụ, Smut, Webtoons, Yaoi
Fọdụ ndị nne na nna na-enye ụmụ ha ihe nketa na BL Motel Manga. Fọdụ na-enye ụmụ ha ụgbọ ala. Nne na nna Jinwon nyere ya motel. Ma ọbụnadị nnukwu. N'elu mmiri ma chọọ nrụzi, Ballantine Motel bụbu ọlaedo ọla edo.
Mana, n'ezie, onye ọkwọ ụgbọala mmanya na-agba n'ụgbọala ya na-agbanwe ihe. Ya mere, mgbe Jinwon weghaara ya, ọ na-eme ụfọdụ nkwalite na mgbakwunye. Ma “Ballantine” bụ aha mara mma, ọ dị ntakịrị.
Yabụ, n'ezie, ọ na-eme nhọrọ doro anya ma belata ya. BL Motel bụ mgbakwunye ọhụrụ nke agbata obi.
N'ezie, ugbu a niile Jinwon chọrọ bụ enyemaka ọhụrụ ma enwere ike ịchọpụta ihe kpatara ọtụtụ ndị mmekọ nwoke na nwoke ji amalite ịbịa. Ọzọkwa, mgbe ndụ na-enye gị lemọn, ị na-adabere ma na-echekwa igwe eji ere ahịa na lube.
Gụọ ọhụụ kachasị ọhụrụ, webtoons adịchaghị, naanị bl ọchị
Egwuregwu Di na Nwunye: 17 Mmekọahụ Fantasies Version 2
Ilekwasị Anya n'Lovehụnanya